Af-dufanle iyo ONLF, Iyamaa Adkaan – Rasaasa News
Jabhada ONLF, ee u dagaalanta xoraynta dadka Somaliyeed ee degan Ogadeeniya oo mudo dheer Atobiya dagaal kula jirta, ayaa sanooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo foodsaartay culasy. Kaas oo kaga imanaya labo dhinac shacabka iyo ciidanka Atobiya.
Waxaa kale oo jira culays saddexaad oo saaran Jabhada, kaas oo ka xoogan labada hore, isbalaadhinta Atobiya ee Bariga Afrika.
Culaysyadaasi ma ahaan doonaa joogto, hadii ay ONLF ka gudubtana, way guulaysan.
Jabhada wadaniga xoraynta Ogadeeniya [Jwxo] oo la aas aasay August 15, 1984, ujeedadeeda kowaadna tahay xoriyad, marxalado badan bay la soo martay halganka ay ku jirto. In kasta oo uusan jirin dhiig cusub oo leh afkaar adag, walina hogaanka iyo talada goynteedu ay gacanta ugu jirto dad ay da,adu daashatay.
Jwxo, waxay shirkeedii 1aad ee abaabul, uguna muhiimsanaa taariikhda halgankeeda ku qabtay gudaha Ogadeeniya degmada Garbo ee gabalka Nogob 1992. Wixii xiligaa ka dambeeyeyna taageerada halgankeedu wuu soo kordhayey, wax kasta oo la soo gudboonaadana way jiidhi jirtay.
Xiliyadii ugu adkaa ee Jabhada soo mara, waxaa ka mid ahaa sanadkii 1994, xiligaas oo ay Jabhadu ku dhawaaqday dagaal hubaysan, ka dib kolkii ay Atobiya tixgalin wayday heshiis ay wada galeen. Xiligaas oo ay Atoobiya bilowday ugaadhsiga madaxda Jabhada ee joogtay gudah iyo dalalka dariska ah.
Si ay kaga gudubto culayska soo foodsaaray, Jabhadu waxay qaadatay siyaasad ah in ay dibada u saarto xubnaha Jabhada ee muhiimka ah.
Muddo kooban ka dibna ONLF, waxay laban laabtay dagaalkii ay kula jirtay Atobiya, waxayna kaga guulaysatay Atobiya gudaha iyo siyaasada dibada. Waxaana markii ugu horaysay ONLF, lagu daray Jabhadaha xornimo doonka ah sanadkii 2002.
Guuldaradii ugu waynayd waxay timid kolkii ay ONLF, dhaxdeeda warmaha iska asashay. Waxaana xili kooban gudahood ONLF dhabarka tusay taageerayaasheedii faraha badnaa. Kuwaas oo aaminay, hadii hanti la,aan lagu heshiin waayey halkay shacabka dhigi kolka libinta la helo [South Sudan, waa uma bisla dimoqraatiyada.
Atoobiya oo wakiil ugaha dalalka reer galbeedka geeska Afrika, ayaa lagula taliyey in ay kordhiso dhaqaalaha la siinayo gabalka Ogaden si loo balaadhiyo kala taga ONLF. Arintaas oo ay Atoobiya ilaa iyo hada guusheeda hadhsanayso. In kasta oo ay jiraan dad markiiba dareemay dhaan dabangaalaha Atoobiya.
Marka laga reebo taageero kala noqoshada shacabka, waxaa ka tagay ONLF, xubno muhiim u ahaa, kuwaas oo lagu duufsaday dufan iyo tolimo halmaamayna dhaartii ay mareen iyo ujeedada taariikhda halgankii ay soo galeen.
Xubnaha ka tagay ONLF, ee sida xun loo adeegsaday ayaa waxyeelo wayn oo sumcadeed gaadhsiisay ONLF. In kasta oo ayna jirin cid ka sumcad xun shakhsi cambaareeyey noloshiisa badhkeed shaqadii uu ku soo jiray.
ONLF, waxaa gaadhay dharbaaxooyin guuldaro, laakiin waxaa aad loogu amaanaa in ayna marna seegin ujeedadii halgan taas oo ah nuxurka jiritaanka halganka iyo ujeedadiisa. Aadna ugu ceebin maayo guuldarooyinka kolka la barbar dhigo doorka ay Atoobiya ka ciyaarayso geeska Afrika siyaasad ahaan iyo milarati ahaanba.
Taariikhdu ma gabowdo, laakiin kolba waxbaa ku soo kordha. Halganka xornimo doon waa halkiisa abid, hunguriga iyo afdufminto waa ayaamo.
Haddii xoriyad horumar lagu dayn lahaa Hong Kong iyo Scotland-ta hawadeedu tahay ka hoos baxa Ingriiska, ayaa ka hadhi lahaa. Haboonaan lahaydaa haduu Afkudufanle haanka ku hayo hanaan dadku kaga tashan karaan go,aamadooda. Shacab raali kuma noqdo in taladooda ay cid kale go,aamiso sida; Afka, dhaqanka, waxbarashada, dhaqaalaha iyo qorshaynta, diinta iyo hanaanka siyaasadeed ee dalku qaadanayo.
Afdufanle, wuxuu ogol yahay oo ku qanacsan yahay manasheegad iyo in la dirsado fikir la,aan.
Afduubkii isku xig xigay ee Atobiya xubno ONLF, ku samaysay waxaa la sheegay in ONLF, ay ka qaadatay go,aan siyaasadeed oo la mid ah midkii 1994. Waxaa kale oo ay xoojisay dhaqdhaqaaqa ay ka wado dibada, inta Atobiya ay ka gaadhayso 2015.
Sida la sheegay ONLF, waxay u dhuutaalaynaysaa dharbaaxo Atobiya dhaxdeeda ka dhacda. Waxaa kale oo ay jilbaha u aasatay uruurinta iyo liqsiinta afkaarta halganka inta ka irdhowday ee Atobiya aragtay.
Ethiopia State-owned broadcaster found guilty of defamation